ကျွန်မနှင့် မျက်မှန်များ Glasses | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကျွန်မနှင့် မျက်မှန်များ Glasses
ကျွန်မနှင့် မျက်မှန်များ Glasses
Posted by weiwei on Jul 26, 2011 in My Dear Diary | 22 comments
အခုရက်ပိုင်း ဒေါ်ဝေေ၀တစ်ယောက် မျက်မှန်များဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေပါသည်။ သူမအတွက် မျက်မှန်ဆိုတာ အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ လောက်ကထဲက မျက်မှန်စတပ်ခဲ့ရတဲ့သူအနေနဲ့ မျက်မှန်ဆိုတာ သူမနဲ့ထပ်တူ ခွဲမရခဲ့ပဲ တသားထဲပဲဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ မျက်မှန်ကို အိပ်ယာဘေးမှာထားအိပ်ပြီး မိုးလင်းတာနဲ့တပ်၊ ညဘက်အိမ်ချိန်နဲ့ ရေချိုးတဲ့အချိန်ပဲမတပ်ရသည်အထိ ခန္ဗာကိုယ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကဲ့သို့ သူမပါလျှင်မဖြစ် အသုံးတည့်လှသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အသက်အရွယ်လေးနဲနဲထောက်လာတော့ တစ်မျိုးဆန်းလာသည်။ အနီးကြည့်ပြသနာဖြစ်လာပါတော့သည်။ အပ်ပေါက်ထိုးလို့မရ၊ စာလုံးတွေကြာကြာဖတ်လို့မရ၊ ဖုန်းပိုက်ဆံသွင်းမယ့်ကတ်ထဲက ဂဏန်းတွေကို သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရလို့ သူများအကူအညီယူရ၊ ထမင်းပန်းကန်ထဲမှ ဟင်းများကို ရွေးစားလို့မရ၊ သတင်းစာမဖတ်နိုင်လို့ သူများဖတ်ပြီးသားကို ပြန်ပြောခိုင်းရ စသဖြင့် ဒုက္ခလေးတွေ ဖြစ်လာတော့ မျက်စိပြန်လည်စမ်းသပ်ရပါတော့သည်။
အခုထိ အဝေးကြည့်ပါဝါမကျသေးသည့်မျက်စိ၊ သူများတွေများ အသက် ၃၀ ကျော်ရင် မျက်မှန်အမြဲတပ်တဲ့အကျင့်ရှိရင် ပါဝါကျတယ်တဲ့။ ကျွန်မကတော့ ပြောင်းပြန်၊ အခုထိ တက်လို့ကောင်းတုန်း၊ အဝေးကြည့်ပါဝါတက်နေလို့ အသစ်ပြန်လုပ်ရချိန်မှာ တဆက်တည်း အနီးကြည့်ပါဝါလဲ ရှိနေပြန်တယ်။ မျက်မှန်တစ်လက်ထဲမှာ အနီးအဝေး နှစ်ခုထည့်ပြီးကြည့်တာကို အသားမကျလို့ မလုပ်ချင်ဘူး။ အဝေးမျက်မှန်ကို ချွတ်လိုက်တပ်လိုက်လဲ အကျင့်မရှိလို့ မလုပ်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စာအမြဲကြည့်ရတဲ့သူမအတွက် အနီးကြည့်ဆိုတာလဲ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပါသည်။ မထူးတော့ပြီမို့ အနီးကြည့်တစ်လက်၊ အဝေးကြည့်တစ်လက် မျက်မှန် ၂ လက် လုပ်လိုက်ရပါတော့သည်။
ပါဝါပိုတိုးလာသည့် အဝေးကြည့်မျက်မှန်က အနီးကြည့်စာလုံးများကို မသဲကွဲတော့ပါ။ အရင်မျက်မှန်အဟောင်းထက် ပိုဆိုးနေပါသည်။ အမြဲတပ်တဲ့မျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီး အနီးကြည့်မျက်မှန်တပ်မှ မြင်ရပါသည်။ ခက်တာက မျက်မှန်တစ်လက်ကို ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ယူတတ်သည့် အလေ့အကျင့်မရှိသေးသဖြင့် အဆင်မပြေသေးပေ၊ အလွန်စိတ်မြန်သည့်သူမအတွက် တပ်လက်စမျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီးမှ အနီးကြည့်ကိုတပ်ပြီး ဖုန်းမက်ဆေ့ထဲမှ စာတစ်ကြောင်းကိုဖတ်ရသောအခါ အလွန်ဒေါသဖြစ်ရပါသည်။ ကြီးဒေါ်ကြီးကို ကဲ့ရဲ့မိတဲ့ဝဋ် ဒီဘ၀မှာတင် ပြန်လည်နေတာခံနေပါပြီ။
အဲဒါတွေက သဘာဝမို့ လွန်ဆန်လို့မရနိုင်ပါ။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ကျွန်မပြောပြချင်တာက အဝေးမှုန်နဲ့အနီးမှုန်မျက်မှန်အကြောင်းပါ။
အဝေးကြည့်ပါဝါများသူတွေ အနီးကြည့်မှုန်လာတဲ့အခါ လုပ်ရတဲ့မျက်မှန်ပါဝါအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းပြောပြချင်လို့ ဒီပို့စ်ကိုရေးလိုက်တာ ..
ကျွန်မက အဝေးကြည့်ပါဝါ ၆၀၀ (-600) နဲ့ စလင်ဒါ ၂၀၀ (200) ရှိတယ်ဆိုပါစို့ …
အနီးကြည့်ပါဝါ ၁၅၀ (+150) ဆိုရင် …
ကျွန်မအတွက် အနီးကြည့်မျက်မှန်အတွက် ပါဝါက (-450) နဲ့ စလင်ဒါ ၂၀၀ (200) ပါ …
အရင်တုန်းက ကျွန်မထင်ခဲ့တာက အဝေးကြည့်မျက်မှန်က သက်သက်ပါဝါ … အနီးကြည့်မျက်မှန်က သီးသန့်ပါဝါလို့ …
အခုတစ်ခေါက် မျက်မှန်လုပ်ဖြစ်တော့မှ ဒီလိုပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ……
ဟိုတစ်လောက မျက်စိသွားစမ်းတာ အသက်ဘယ်လောက်လဲ
လေးဆယ့် ဘယ်လောက်လဲ လာလုပ်နေလို့ ဘာလဲဗျ အဲလောက်အိုစာနေလို့လား ဆိုတော့
မဟုတ်ပါဘူး အနီးမှုန်က လေးဆယ်ကျော်မှ ဖြစ်တာမို့ပါတဲ့။
အခုခေတ်တော့ အင်တာနက် နှိပ်စက်လို့ စောစောစီးစီး မှန်ကြောင်ဖြစ်ပါပြီ။
ဟန်ယောင်ဝေ ရဲ့ တူမ မှန်ကြောင်ဝေ ရေ..
အင်းးးး …. မျက်မှန်စမ်းတဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်မအသက်ကို ကောင်တာက စာရေးမကောင်မလေးက ၃ နှင့် ၂ နဲ့ မှားရေးထားတယ် … အသက်ကိုသေချာပြောတာတောင်မှ အဲဒီကောင်မလေးက မထင်လို့နဲ့တူပါတယ် …
အဲဒီတော့ မျက်စိစမ်းတဲ့ဆရာဝန်က ဒီလောက်အသက် နှစ်ဆယ်ကျော်လေးနဲ့ အနီးမှုန်ရှိနေတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ …
အဲဒီတော့မှ ၂ မဟုတ်ပါဘူး … ၃ ပါလို့ ပြန်ပြင်ပြောလိုက်ရတယ် …
ဆရာဝန်လဲ အနီးမှုန်ဖြစ်နေတယ်ထင်ပါ့ …
နွယ်ပင်လဲ မျက်မှန်ကို (6)တန်းလောက်ကတည်းက တက်ရတာပါ ..
ဒါပေမယ့် အမြဲတော့ တပ်မထားဘူး ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စာကြည့်ချိန်မှ တက်သလို
အခုလဲ Tv ကြည့်တဲ့အခါနဲ့ Computer သုံးတဲ့ အချိန်လောက်ပဲ တပ်ဖြစ်တယ် .
၄၊ ၅၊ ၆တန်းလောက်တုန်းကတော့ မျက်မှန်တပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဆို လေးလုံးလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတယ်
အဲဒါ ပုံမှန်မတပ်ဘဲ ပေကပ်နေတာ
မျက်စိစမ်းပြီး မျက်မှန်လုပ်ပြီး ခဏပဲ
Whether you’re reading, driving or working onacomputer,
you can enjoy crisp, clear visionΦ with AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL contact lenses even if approaching 40 or over. They’re designed with TriComfort™ Technology to provide breathability and moisture retention, while resisting deposit buildup. At last,alens that providesasmooth transition as your eyes move naturally from one focal distance to another – near, intermediate and far.
နောက်ပိုင်း မှန်တွေမှာ.. အနီးနဲ့အဝေး..ဘိုင်ဖိုကယ်ကို..မသိသာအောင်လုပ်ပေးတယ်..။
မှန်မှာ..ကန့်လန့်ကြီးခွဲထားတာမဟုတ်ပဲ.. မှန်ဘီလူးကို မသိမသာ ပြောင်းထားတယ်ထင်တာပဲ..။
ဒါဆို မဝေနောက်ကို မနောလိုက်တော့မယ်ထင်တယ်… တစ်နေကုန်ကွန်ပျူတာကြည့် အိမ်ပြန်ရောက် ရေမိုးချိုး ထမင်းစား ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နဲ့ မဝေလောက်သာ ဖြစ်လာရင်တော့ မျက်မှန်ဖိုးမတတ်နိုင်လို့ ပုလင်းကွဲဖင်ကို ကောက်တပ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်လာမှာတော့ကြောက်တောင်လာပြီ။
အသက် ၃၀ ကျော်တဲ့အထိ အဝေးမမှုန်သေးရင်တော့ အခြေအနေကောင်းပါတယ် ..
အသက်ကြီးလာရင် အနီးမှုန်ပဲဖြစ်လာမှာမို့ စိတ်မပူပါနဲ့ .. အနီးမှုန်က ပါဝါလဲ သိပ်မများဘူး … မှန်တွေလဲအရမ်းကောင်းလို့ ပါးပါးလေးပဲဖြစ်မှာပါ ….
ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြတာလဲဆိုတာလေးပါ ပြောပေးပါလား။ ဘ၀တူတွေဖြစ်နေလို့။
American Vision မှာ ကြုံတဲ့ဆရာဝန်နဲ့စမ်းခဲ့တာမို့ နာမည်တော့ မမှတ်မိဘူး … မျက်မှန်လုပ်တုန်းက သူတို့က သူကြီးပြောတဲ့မှန်လိုမျိုးရှိကြောင်းမပြောလိုက်လို့ ကျွန်မလဲ သမရိုးကျအတိုင်း ၂ လက်လုပ်ခဲ့လိုက်မိတယ် … အိမ်ရောက်တော့မှ ကျွန်မညီမက အနီးနဲ့အဝေးကို မသိသာအောင်လုပ်ထားတဲ့မှန်အမျိုးအစားပေါ်နေပြီလို့ပြောတော့ နောက်ကျသွားပြီလေ … ထပ်လုပ်ရင် ပိုက်ဆံထပ်ကုန်မှာမို့ တစ်နှစ်လောက်တော့ သီးခံလိုက်အုန်းမယ် …
ကျနေုာ်အရင်က မျက်မှန်လုပ်ရင် အနီးအဝေး နှစ်ခုပါတာ ကိုလုပ်ထားတာ။
ဒီတစ်ခေါက် အဝေး က ကောင်းတယ် မလိုဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် အနီးတစ်ခုထဲလုပ်တာ။
အခု မေ့မေ့ပြီး အဝေးကို အနီးနဲ့ကြည့်မိနေလို့ ဒုက္ခရောက်နေတယ်။
မျက်မှန်တစ်ခုထဲမှာအ နီးအဝေး တစ်ခါတဲ့ ဘိုင်ဖိုကယ်သာလုပ်ထား မမှားဘူး။
ဒါမှ ရဲတိုက်လို အနီးကြည့်ကြည့် အဝေးကြည့်ကြည့်လို့အော်နိုင်မှာလေ
မဝေတော့ နောက်ကျနေပြီ ဆူးတော့ ဟိုတလောက မျက်စိညောင်းညောင်းနေလို့ မျက်စိသွားစမ်းတယ်။
အမေရိကန် ဗေးရှင်းမှာ.. ဆရာဝန် စမ်းသပ်ခ ၃၅၀၀ ကျပ် မျက်မှန် လုပ်ခ.. ၁၇၀၀၀ကျပ်..
အခု ညည ကွန်ပြူတာ ကြည့်ရင် မျက်မှန် အသစ်စက်စက်ကလေး တပ်ပြီးတော့ ကြည့်တယ်။ ကွန်ပြူတာနားမှာ ထားတယ်။
ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြလဲ ဆိုလို့.. ဆူး ပြတဲ့ ဆရာဝန် နာမည်က ဒေါ်မေ၀င်း..
ဆယ်တန်းတုန်းကတော့ မျက်စိကိုက်လို့ မျက်မှန်လုပ်ထားတယ် … စလင်ဒါ ရှိတာနဲ့ … အဝေးကလည်း … မမြင်တော့ …. ဆရာဝန်က အမြဲတက်ရမယ်ဆိုလို့ … ချွေးမစားပဲ ကြာရှည်ခံအောင် တိုက်တေနီယံနဲ့ လုပ်လိုက်တယ် … တိုက်တေနီယံကလည်း အဲ့ဒီအချိန်က ရွှေရောင်နဲ့ ငွေရောင်ပဲ လုပ်လို့ ရတာ … ။ ရွှေရောင်မကြိုက်တော့ ငွေရောင် လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်… မျက်မှန်ရတဲ့နေ့ တရက်ပဲ ကောင်းကောင်းတပ်ပြီး … မှန်ထဲ ပြန်ကြည့်တော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး …။ မျက်စိက မမြင်ရပေမဲ့ … မျက်မှန် သုံးတော့ … မှန်ကြီးတခု ခြားနေတာ အတော် ဒုက္ခရောက်တယ်… ကော်ဖီ မှုတ်သောက်လျှင်လည်း .. အခိုးတွေ မှန်မှာလာရိုက်တယ်… မျက်မှန်ချွတ်လိုက်လျှင်လည်း နှာခေါင်းပေါ်မှာ အရာထင်နေတယ် … ။ အတော်လေး စိတ်ကျဉ်းကြပ်ပါတယ် … အဲ့ဒါမျိုး တသက်လုံး လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ … မလုပ်ချင်တာနဲ့ … ။ ခေါင်းနဲ့ မျက်စိဘယ်လောက်ကိုက်ကိုက် လုံးဝမျက်မှန်မတတ်တော့ဘူး …. ပေတေပြီးခံတယ် .. မမြင်ရဘူးလား ၊ မြင်ရအောင် အားစိုက်ကြည့်တယ် ။ မျက်စိအားဆေးတွေ စားတယ် … အခုဆို ခေါင်းနည်းနည်းပဲကိုက်တော့တယ် … ။ မျက်မှန်တော့ မလိုတော့ဘူး … ။
မျက်လုံးအားကောင်းချင်ရင် ဝက်အသဲစား၊ မုန်လာဥနီစား၊ မျက်စိအားတိုဆေးစား ရမယ်ပြောကြတယ်။ သဘာဝသီးနှံတွေကတော့ ထားပါတော့၊ မျက်စိအားတိုးဆေးတွေထဲမှာ အလင်းရောင်မျက်စိအားတိုးဆေးကို စွမ်းတယ်ပြောကြသူများရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ သိပ်မကြားရတော့ပြန်ဘူး။ အနောက်တိုင်းဆေးတွေကို ဖတ်ကြည့်တာ အက်ဖ်ဒီအေ အတည်ပြုချက်ရထားတာ တခုမှမတွေ့သေးဘူး။ သောက်စေး၊ ခပ်ဆေး၊ brand name, generic ဆေးအကုန်လုံးပဲ။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် အက်ဖ်ဒီအေထံ တင်ပြဆဲ၊ လေ့လာနေဆဲ လို့သာတွေ့ဖူးတယ်။ ထင်တာတော့ သိပ္ပံနည်း စမ်းသပ်မှုတွေအရ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ မျက်စိအားတိုးဆေးမတွေ့သေးဘူးမှတ်တယ်။ အက်ဖ်ဒီအေကလည်း လုံလောက် ခိုင်လုံတဲ့ တွေ့ရှိချက်များ မဟုတ်ပေမယ့် လူကိုအန္တရာယ်မပြုနိုင်ရင် ဝိနည်းလွတ် ရောင်းခွင့်ပြုပုံရတယ်…။ ကျနော်သိတာမှားနေရင် ပြောကြပါအုံး။
ဒီပို့စ်ကို ပြန်ရှာလိုက်တော့ ၃ နှစ်တောင် ကျော်သွားပြီပဲ ..
နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံ ထပ်ပေါင်းပြီး ပို့စ်တစ်ခု ထပ်ရေးဖြစ်သွားတယ် ..
မှန်တာပေါ့ အန်ကယ်ကြီးရေ ..
အလယ်မှာ အစင်းကြီးနဲ့ မျက်မှန်က ကျွန်မအသက်ကြီးပြီ အဖွားကြီးဖြစ်ပြီလို့ ကြေညာသလိုဖြစ်နေလို့ လုံးဝ (လုံးဝ) မကြိုက်ဘူး ..
အန်ကယ်ကြီးကို ပြန်တွေ့ရလို့ ကြိုဆိုပါတယ် ..
အန်ကယ်ကြီးပျောက်နေတာ ၃ နှစ်လောက်တောင် ရှိပြီထင်တယ် ..
မျက်လုံးကို အိပ်ရုံနဲ့ အနားပေးတယ်လို့ မထင်မိတော့ဘူး… မျက်စိ အစာလဲ ကျွေးရမယ်လို့ ထင်လာတယ်… လွန်ခဲ့သော ၈ လလောက်က အဝေးမှုန်သွားတယ်.. မျက်မှန်မတပ်ရပေမယ့်… စိတ်တိုင်းမကျခဲ့ဘူး… အဲကတည်းက ဒိုတာ မခုတ်တော့တာ.. ခုဆို အဝေး ပြန်ကောင်းလာတယ်… သဘောက ညှာလို့ရသမျှ ညှာလိုက်ရင် မဆိုးဘူးလားလို့…
ဒီမှာလည်း အဝေးတစ်လက် အနီးတစ်လက်
မေ့တက်လွန်လို့ အဝေးကို ကားထဲမှာပဲ့ထားပြီး
အန်ကယ်ဂျီး ပျောက်တာ ၂ နှစ်
ကျနော် ရွာထဲရောက်ပြီး မကြာခင် အန်ကယ်ဂျီး ပျောက်သွားတာ